प्रधानमन्त्री ओलीले बोले गम्भिर झुट ! यसरी भयो पर्दाफास – Gazabkonews
प्रधानमन्त्री ओलीले बोले गम्भिर झुट ! यसरी भयो पर्दाफास
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झुटो बोलेर निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याउने रणनीति लिएको प्रचण्ड–नेपाल समुहले आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्ड नेपाल समुहले हामी आधिकारीक हौं भनेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पत्र आयोगले रित नपुगेको भनेर फिर्ता गरिदिएको बताएका थिए । तर प्रचण्ड नेपाल समुहले भने आयोगले पत्र फिर्ता नपठाएको दावी गरेको छ ।
यता निर्वाचन आयोगले पनि कुनै समुहलाई पनि पत्र फिर्ता नपठाएको जनाएको छ । आयोगमा दर्ताका लागि गएका निवेदन फिर्ता गर्न नमिल्ने पनि आयोगले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रवासी नेपालीहरुसँगको एक भर्चुअल अन्तरक्रियामा सो दाबी गरेका थिए।
‘उहाँहरु (प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता) ले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको रहेछ तर आयोगले उहाँहरुको निवेदन रित नपुगेको र अनुचित भनेर हिजो रद्द गरेर फिर्ता पठाइदियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रवासी नेपालीहरुसँग भने, ‘आधिकारिक पार्टी हामी हौं भन्ने उहाँहरुको दाबी थियो, हिजो आयोगले यो अंग नपुगेको, व्यहोरा नपुगेको, कानुन उल्लेख नभएको, प्रमाण नभएको यस्तो खालको निवेदनको केहि अर्थ छैन भनेर फिर्ता पठाइदियो।’नेतृत्वको नेकपाले आफूहरु आधिकारिक नेकपा भएको र चुनाव चिन्ह सूर्य पाउनु पर्ने भनी दिएको निवेदनलाई निर्वाचन आयोगले फिर्ता गरेको दाबी गरेका छन्।
यता प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दाबी गरेरै झूठ बोलेको बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगमा चाहिने कागजात दिने, अपडेट गराउने काम गरेको र कुनै पत्र फिर्ता नगरिएको बताएका छन् ।
प्रचण्ड नेपाल समुहले विहिवार मात्र आयोग पुगेर पार्टी दल दर्ता गर्दाको स्थितिमा भएको हेरफेर अनुसूचि १८ बमोजिमको फर्म्याटमा भरेर निर्वाचन आयुक्तहरुलाई बुझाएको दावी गरेका छन् । नेकपा अनौपचारीक रुपमा विभाजन भएपछि चुनाव चिन्ह सुर्य र पार्टी नाममा दुवै पक्षले दावी गर्दै आएका छन् ।